Miyaad horey uga qayb qaadatay Ubuntu Isticmaalka Sahanka? | Laga soo bilaabo Linux
Maarso 9 Canonical ayaa fariin soo dhigay Twitter weydiinaya isticmaaleyaasha adduunka oo dhan inay kaqeybqaataan sahanka isticmaalaha Ubuntu (Sahanka Isticmaalaha Ubuntu).
Sahanka Isticmaalaha Ubuntu 2012 wuxuu ka caawin doonaa Canonical in la dhiso sawir ah sida loo isticmaalo, loo wadaago loona ogaado.
Sahanku wuxuu qaadan doonaa oo keliya 5 daqiiqo oo ka mid ah waqtigaaga qaaliga ah dhammaantiisna macluumaadka gebi ahaanba lama aqoonsan karo; Canonical cidna ma weydiin doono faahfaahinta xiriirkaaga.
“Sahankan wuxuu naga caawin doonaa inaan fahanno sababta ay dadku u doortaan una adeegsadaan Ubuntu. Waxaan jeclaan lahayn inaan aruurino dookhyada isticmaaleyaasha hadda isticmaala adduunka oo dhan si aan u sii wadno inaan u soo bandhigno wax soo saar bilaash ah dad badan intii suurtagal ah, ”ayaa lagu yiri bogga sahanka.
Ka qaybqaado hadda Ubuntu Isticmaalka Xogta 2012
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Isticmaal FileLet » Miyaad horey uga qayb qaadatay Ubuntu Isticmaalka Sahanka?
aad uxun maan weydiisan midnimo
Waad salaaman tahay, bartaadu waxay u muuqataa mid aad u xiiso badan! Aniguba waxaan hayaa baloog waxaanan jecelahay baarka inaan la wadaago oo ku haray shaashadda dusheeda, sidee taas u sameysay?
Jawaab Josep López
Ma garanayo sida ay u egtahay, miyaadan xasuusan doonin koodhka? 😛
Waa inay noqotaa mid ula kac ah, sax?
Waxaa lagu sameeyay "gacan". Waxaad eegi kartaa lambarka isha ...: O)
José, raaligelinteyda laakiin ma haysto waqti aan ku raadiyo.
Si kastaba ha noqotee, waad sameyn kartaa adoo raacaya talaabooyinkan:
1) Waxaan furay qoraal kasta oo baloog ah (maxaa yeelay kaliya bogaggan ayuu baarkaasi ka muuqdaa).
2) Midig guji oo dooro ikhtiyaarka Fiiri koodhka ilaha.
3) Waxa hadhay ayaa ah in la nuqulo nambarka isha ee u dhiganta.
Ha iloobin in kaliya maahan koodhka mid kasta oo ka mid ah badhannada ay tahay inaad nuqul ka sameyso laakiin sidoo kale qaababka loo adeegsaday aaggaas oo dhan.
Si aad u nuquliso qaababka, waxaa ugu wanaagsan in aad midig u gujiso baarka oo aad doorato ikhtiyaarka Kormeerka Element.
Waan ka xumahay laakiin tani hadda waa dhammaan caawimaadda aan bixin karo. Sida aad arki doonto, waa mowduuc aan nuqul-dhejin lahayn, laakiin waa inaad qabataa shaqo yar oo waqti qaadata. 🙁
Waxaa xiiso leh in Qurbajoogtu aysan ku qorneyn qeybta shabakadaha bulshada.
Ha weydiisan Midnimo ¬¬ '
Iyagu waa Canoni $ badanaa, waxay xiiseynayaan inay ka yimaadaan shirkadaha si ay u awoodaan inay faa'iido u yeeshaan
Haddii aad la yaabto in aysan weydiisan Midnimo, ha la yaabin, Ubuntu wuxuu daacad u ahaan doonaa Midnimada maxaa yeelay Midnimadu waa horumarka Ubuntu ay ka go'an tahay inay soo gasho adduunka taleefannada gacanta iyo kiniiniyada.
Hadaad isweydiiso sababta qurbajoogtu uga mid ahayn shabakadaha bulshada, ha la yaabin, Qurbajoogtu bilow ayey ahayd kor u kac, laakiin in yar ayaa ka hadasha, xitaa waxaan u maleynayaa inay wali ku sii socdaan nidaamkii casuumaada, oo hada Google+ ay ku darsadeen warka ah Dispora ayaa loo keenay Waxay si daacadnimo leh ugu muuqataa inaysan shabakadani waligeed iska bixin karin. Maxaa iga yaabiyey waa in aqoonsigaas uusan muuqan.
Waxay umuuqataa in sahankan looga dan leeyahay sida ay ku ogaadeen Ubuntu iyo sababta ay u adeegsadaan.
Taasi waa inuu sankiisa u diro qaar, isaga oo uqaadaya xishoodka iyo uqalma mashruucyada kale.
Waxaas oo dhan waan necbahay uunka
Ma fahmin sababta ay u dhibayaan inaysan weydiisan midnimo, gebi ahaanba yaa dadka dib ugu celinaya ubuntu iyagoo midnimo leh, markaa rakib maareeye daaqad kale iyo mudo, mise waxaad ka careysiisaa isbedelka distro, gaar ahaan waxaan u isticmaalaa gnome3 qaabka ugu dambeeyay xilligii ubuntu. Salaan Pablo.
Ku jawaab ubunteropy
Waxaan u arkaa kuwa soo socda mid xiiso leh ... Mid ka mid ah dadka isticmaala ee ka faalooday qoraalkan, wuxuu leeyahay mowqif adag oo ka dhan ah Ubuntu, xitaa sidaas darteed wuxuu leeyahay baloog wax ka qabta GNU / Linux, dhexdiisa wuxuu ku leeyahay daruur tag, daruurahaas ee sumadaha calaamadda saddexaad ee soo gelinta ugu badani qiyaastay waxa ay tahay… UBUNTU !!!! Iyada oo leh «110 mawduuc»… Above tags kale sida Debian (86), ArchLinux (39), GNU / Linux (54), Fedora (14), Linux (72) iyo Linux Mint (40)…
Tani waxay soo jiidanaysaa dareenkeyga, maxaa yeelay caannimada Ubuntu halkii ay bulshada uga dabaaldegi laheyd ayaa soo baxday inay saameyn xun ku yeelatay dad badan oo Linuxero ah, waxay ku eedeeyaan badanaa raadinta faa'iido taasna waxay igu hogaamineysaa inaan isweydiiyo, Kawaran Red Hat? Muxuu ahaa Solaris? Laga soo bilaabo SuSE Enterprise? Si aad u magacowdo dhowr ka mid ah tiro aad u tiro badan oo ah 'Distros' oo shirkad faa'iido doon ah ka dambeysay gadaashooda.
Ubuntu iyo sidoo kale Distros badan ayaa ah mid kale oo ka mid ah fursadaha cajiibka ah ee dunida GNU / Linux oo leh falsafad u gaar ah iyo makaanik u gaar ah. Miyaadan jeclayn Ubuntu? Waxaad haysaa boqolaal qaybood oo bilaash ah. Ma jeceshahay Ubuntu laakiin ma jecla Midnimada? Ku rakib maareeyaha aad rabto (kuwa ugu caansan waxay ku jiraan keydadka).
Waxaan jeclaan lahaa inaan waco si aan u milicsado, Dagaalka Distro waa nacasnimada ugu weyn ee dadka isticmaala GNU / Linux ay sameyn karaan, Distros waa kala duwanaansho fudud oo isla kernel ah iyo bulsho xor ah waxaan xor uga nahay waxyaabo badan, oo ay ka mid tahay difaacaya waxyaabaha aan jecel nahay, laakiin EEBBE, looma baahna in la weeraro diro gaar ah ama adeegsadayaasheeda, ixtiraamku wuxuu naga dhigayaa dad ilbax ah oo bislaaday.
Ka doodista caqliga waxay ila tahay aniga mid aad u fiican, cayda distoor ku saabsan baloog iyadoo lala wadaagayo asxaabteyda ku siisa wararka isla distroga ah bartaada, waxaan u arkaa inay tahay munaafaqnimo iyo ixtiraam daro asxaabtaada.
Iga raali noqo dhamaan faallooyinka, waxaan rajaynayaa inaad wax yar milicsato 😉
Daraasad la sameeyay, inkasta oo aanan mar dambe isticmaalin ubuntu. Waxay ahayd midda ugu dambayn igu kaliftay inaan kubiro Linux. Isbeddelo badan iyo gaar ahaan midnimo, ayaa iga dhigtay inaan fiiriyo waxyaabaha kale ee aan u baahnahay (Linux isticmaal arch hadda).